हरेस नखानुहोस्: तपाईंको २०२१ डाईट, फिटनेस रेजोलुसन पुन: नविकरण गर्ने9तरिकाहरू यस्ता छन - Nawalpur Dainik
हरेस नखानुहोस्: तपाईंको २०२१ डाईट, फिटनेस रेजोलुसन पुन: नविकरण गर्ने9तरिकाहरू यस्ता छन
नयाँ वर्षको रिजोल्युसनले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ जब ती हाम्रो योजनाहरू अनुसार छैनन्।
रिजोलुसनमा पुग्नको लागि तपाइँको दृष्टिकोणलाई पुन: सुधार गर्दा तपाइँ सफल हुन सक्नुहुन्छ।
विशिष्ट लक्ष्यहरू सिर्जना गर्नुहोस् र ती हासिल गर्न आफैलाई समय दिनुहोस्।
नयाँ वर्षका रिजोलुसनहरू उत्साहजनक छन्। उनीहरूले प्रेरणाको भावना सिर्जना गर्न सक्छन् र तपाईंको स्वास्थ्यलाई नियन्त्रणमा लिन र अगाडिको वर्ष राम्रोको लागि आशा गर्न सक्छन्।
“यसले डोपामाइन र एड्रेनालाईनको ठूलो शट दिन सक्छ जसले ‘हो! त्यसो गरौं! ” Teralyn सेल, पीएचडी, मनोचिकित्सक र मस्तिष्क स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हेल्थलाइनलाई भने।
जहाँसम्म, यदि तपाइँ परिवर्तन गर्न वा तपाइँको लक्ष्यहरू पुग्नको लागि कार्य गर्नमा कमी हुनुभयो भने, तपाइँले असफलताको भावना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
“हामी अझ बढी नकारात्मक सोचहरुमा पनि संलग्न हुन सक्छौं, जसले हाम्रो न्यूरोकेमिस्ट्रीलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्दछ।”
क्रिस्टिना ब्राउन, वजन घटाउने कोच, सहमत हुन्छन्। उनले भनिन् कि संकल्पले प्रायः नकारात्मक असर पार्छ।
ब्राउनले हेल्थलाइनलाई भने, “संकल्प सिर्जना गर्ने बारे सोच्दा मात्र सोचले हामीलाई तनाव, निराश वा उदासिन महसुस गराउँछ।” “हामी आफैंमा धेरै दबाव दियौं एक निश्चित तरिका हुन वा एक बानी रोक्न / शुरू गर्न, र जब हामी हाम्रा प्रस्तावहरू राख्न असफल हुन्छौं – जुन हामी मध्ये percent ० प्रतिशत भन्दा बढी यसमा असफल हुन्छन् – तब हामी ती नकारात्मक भावनाहरू महसुस गर्दछौं I उल्लेख गरिएको
स्वस्थ परिवर्तनहरू गर्नु अझ राम्रो चीज हो र यसको लागि प्रयास गर्न लायकको छ।
जहाँसम्म, निम्न9तरीकामा तपाईंको दृष्टिकोण र मानसिकता समायोजित गरेर तपाईंलाई ठूलो सफलताको लागि सेट अप गर्न सक्दछ।
१. जनवरीमा यति धेरै ‘वजन’ नराख्नुहोस्
वर्षको सुरूमा गोल लात प्रलोभनकारी छ, ब्राउन भने जनवरी मा धेरै दबाब राखिएको छ भने।
“मलाई विश्वास छ कि यदि तपाईं आफ्नो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न र आफ्नै लागि भिन्न वास्तविकता सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ भने परिवर्तन अब सुरु हुनै पर्छ। सोमबार होइन, जनवरी १ होइन, तर अहिले, “उनले भनिन्। “यदि हामीलाई लाग्छ कि हामी १ जनवरीमा मात्र परिवर्तन / रेजोलुसन गर्न सक्दछौं, हामी आफै असफल हुन्छौं।”
२. प्रगतिको लागि प्रयास गर्नुहोस् पूर्णतामा होइन
जब प्रगतिको सट्टा पूर्णता लक्ष्य हो, ब्राउनले भने कि धेरै व्यक्तिहरू उनीहरू आफू “पूर्ण” हुन नसक्ने बित्तिकै अन्त्य हुन्छन्।
“स्वस्थ हुने सब भन्दा राम्रो र सजिलो तरीका भनेको आजीवन बानीहरू बनाउनु हो। आहार काम गर्दैन, तर लामो समय को लागी दिगो हुन्छ कि स्वस्थ खाने बानी काम, “उनले भने। “Weeks हप्ताको लागि प्रत्येक दिन व्यायाम र त्यसपछि छोड्दा तपाईको नतिजा आउँदैन। तपाईको बाँकी जीवनको लागि हप्तामा days दिन व्यायाम गर्नुहोस्। ”
३. तपाईको दिमाग को स्वास्थ्य सुधार गर्न ध्यान दिनुहोस्
जबकि विशिष्ट रिजोलुसनको तपाईंको शरीर कस्तो देखिन्छ तपाईंले भावनात्मक रूपमा महसुस गरेको भन्दा बढी गर्न सकीन्छ, बिक्रीले भने त्यो भावनालाई उल्टाउने प्रयास गर्नुहोस्।
“[अधिकांश] व्यक्तिहरूसँग थोरै पछाडि पछाडि हुन्छन् र सोच्छन् कि यदि उनीहरूले तौल घटाए भने उनीहरूले अझ राम्रो महसुस गर्नेछन्।” “यद्यपि यो केहि केसहरूमा सत्य हुन सक्दछ, हामी सँधै यसको बारे [स्वास्थ्यकर्मी] हिसाबले गर्दैनौं।”
बेच्नुहोस् तपाईको दिमागको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ प्राकृतिक रूपमा तपाईको अनुभवी-राम्रो रसायनलाई बढाउने। त्यसो गरेर, तपाईं बढी सचेत हुनुहुनेछ, अझ बढी गर्नुहोस्, र स्वाभाविक रूपमा व्यायाम र राम्रो खान चाहनुहुन्छ।
“किनकि २०२० भावनात्मक तवरले थकित भएको छ, कसरी २०२१ को समाधानको रूपमा तपाईको दिमागको स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्ने बारेमा,” बिक्रिकाले भने।
Prevफाइजर भ्याक्सिन सम्भावित नयाँ कोरोनाभाइरस भ्यारियन्टहरू विरूद्ध काम गर्ने
Nextसीडीसीले भन्छ अब सबैले 65 बर्ष भन्दा बढीलाई COVID-19 भ्याक्सिनको पहुँच प्राप्त गर्नु पर्छ